माधव नेपालको नयाँ पार्टीमा नगएका नेताको छलफलमा के आयो निष्कर्ष ?
काठमाडौं– नेकपा (एमाले)मा माधवकुमार नेपालपक्षमा रहेका र पछिल्लो समय उनको साथ छाडेका नेताहरुले एमाले एकता कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिने निर्णय गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको यो समूहका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु तथा संघीय संसद्‍का सदस्यहरुको भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो। ‘हामीले १० बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष ओलीलाई दबाब दिने निर्णय गरेका छौं,’ प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले भने, ‘त्यसबारे केहीबेरमा लिखित धारणा पनि सार्वजनिक गर्दैछौं।’
ओलीले सहमति कार्यान्वयन नगरे एमालेबाट विद्रोह गर्ने बताइरहेका उनीहरुले यसबारे भने कुनै निर्णय गरेनन्। भेलामा एमालेका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य र सांसदहरुसमेत गरेर ५७ जना उपस्थित रहेको उनले बताए।
स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त र अमृत बोहोरासहित २ दर्जन केन्द्रीय सदस्यको बैठक बसेको हो ।
यसअघि बिहीबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेका ८ जना स्थायी कमिटी सदस्यले नेपाल समूहका १४ सांसदलाई गरेको कारबाही ओलीले फिर्ता लिनुपर्ने र नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियाबाट माधव नेपाल पछि हट्नुपर्ने बताएका थिए।
तपाईहरु अब केपी ओलीतिरै लाग्नुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा घनश्याम भुसालले यस्तो जवाफ दिए :
होइन । हामी १० बुँदेको तयारीमा सामूहिकरुपमा नै लाग्यौं । ओली र माधव कमरेड दुबैजना बसेर कार्यदल बनाउनुभयो । दिइएको कार्यादेशभित्रै हामीले १० बुँदे तयार गर्यौं । त्यो वहाँहरुसमेतको राय, सल्लाह र सुझावमा तयार गरिएको हो । पार्टीलाई हामीले कसरी एकतावद्ध पार्न सकिन्छ, विधि कहाँ बिग्रिएको छ, कहाँ भत्किएको छ, त्यो विधिको पुनस्र्थापना कसरी गर्न सकिन्छ, भन्ने हिसाबले हामीले १० बुँदे तयार गर्यौं । तर, त्यो १० बुँदेको कार्यान्वयन जसरी हुनुपथ्र्यो, त्यो कार्यान्वयन भएन ।
कमरेड केपी ओलीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्दाखेरि हामीले त्यो बैठकमै गएर भन्यौं, अहिले यो बैठक रोक्नोस्, १० बुँदेअनुसार अगाडि बढौं । तर, उहाँले त्यसमा ध्यान दिनुभएन । गर्दै–गर्दै उहाँ निरन्तर अगाडि बढिरहनुभयो । यस अर्थमा १० बुँदे उहाँहरुले लागू गरिराख्नुभएको छैन, जसले अहिलेको परिस्थिति बन्यो । तर, अझै पनि हामी पार्टी एकताकै पक्षमा हो । त्यसैले १० बुँदेको इमान्दार कार्यान्वयन होस् भन्ने नै हो हाम्रो ।
माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले सनाखतका लागि बोलायो- काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरपक्षको नयाँ दल सनाखत गर्ने भएको छ।
प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको दर्ताका लागि निवेदन परेसँगै निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते सनाखतको समय छुट्याएको छ।
शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकले माधव नेपालको नेतृत्वमा प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल दर्ताका लागि केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको सनाखत गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसका लागि भदौ ९ गते बिहान साढे ११ बजेदेखि २ बजेसम्मको समय छुट्याइएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जनाकारी दिए। सनाखत सकिएसँगै सोही दिन नयाँ दल दर्ता हुने छ। दुबै दलका नेतालाई नागरिकतासहित उपस्थित हुन भनिएको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश जारी भएसँगै नेता नेपाल र ठाकुर नयाँ दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका थिए। बुधबार दर्ता गरिएको दललाई आयोगले मान्यता नदिएपछि शुक्रबार नेपाल पक्षले नेकपा एकीकृत समाजवादी र ठाकुरपक्षले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल दर्ताका लागि आयोगमा निवदेन दिएका थिए।
माधव नेपाल र महन्थ ठाकुर दुवैको पार्टीको नाम परिवर्तन- माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि दिएको नाम परिवर्तन गरेका छन्। मंगलबार नेपाल पक्षले नेकपा एमाले समाजवादी र ठाकुर पक्षले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) नाममा दल दर्ताको लागि निवेदन दिएको थिए।
तर, ती नामहरू दर्ता गर्न नमिल्ने भएपछि दुबै पक्षले नाम परिवर्तन गर्ने भएका हुन्। नेपाल पक्षले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाउन निवेदन दिइसकेको छ।आयोग उच्च स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षले बिहीबार सो नाम राखेर नयाँ निवेदन पेश गरिसकेको छ।
‘उहाँहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नाम बनाउन निवेदन हिजै दिनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोगको सचिवालयमै यसबारे छलफल भइसकेको छ। उहाँहरु त्यसको बाँकी डकुमेन्ट लिएर आजै आयोग आउने बताउनुभएको छ।’
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाका आधारमा एमाले जोडिएको र जसपा जोडिएको पार्टीको दल दर्ता नहुने संभावना देखेर उनीहरुले नाम परिवर्तन गरेका हुन्।‘मंगलबार आयोगमा दर्ता भएका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले समाजवादी दुबै नाम परिवर्तन भइसकेको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले आफ्नो पार्टीसँग मिल्ने नाम नदिन निर्वाचन आयोगमा बिहीबार निवेदन दिएका थिए। यस्तै नेकपा एमालेले पनि आफ्नो दलको नाम जोडेर कुनै नाम नदिन निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार निवेदन दिइसकेको छ। महन्थ ठाकुर पक्षले भने परिवर्तन गर्ने नाम खोजी गरिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार ठाकुर पक्षले आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका ज्ञानेन्द्र यादवको दल लिने प्रयास गरिरहेका छन्। ज्ञानेन्द्र यादवले आफ्नो दलको नाम फिर्ता लिने र त्यही नाम ठाकुर पक्षलाई दिन अहिले छलफल गरिरहेका छन्।
ठाकुर पक्षका एक नेताका अनुसार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । ठाकुर पक्षले आजै नयाँ नाम जुराएर आयोगमा निवेदन दिँदैछ। ‘नयाँ नामबारे हामी छलफलमै छौं, ती नेताले भने, ‘आजै नाम जुराएर आयोगमा निवेदन दिन्छौं।’